Mareykanka oo soo saarayo sharci cusub oo lagu musaafirinayo Dadka muhaajiriinta | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Mareykanka oo soo saarayo sharci cusub oo lagu musaafirinayo Dadka muhaajiriinta
Washington (Halqaran.com) – Dowladda Mareykanka ayaa la filayaa in maanta ay soo saarto sharci cusub oo oggolaanaya in si deg deg ah dalkeeda looga musaafuriyo muhaajiriinta aan haysan dukumeentiyo ay dalkaas ku joogaan.
Sharcigan ayaa laamaha ammaanka iyo kuwa socdaalka u oggolaan doona in kiiska ku saabsan musaafrinta dadkan aan loo cuskanin wax maxkamad ah.
Sharcigan cusub ayaa fududeynaya in la musaafuriyo muhaajiriinta aan sharciyada wadan, isla markaana aan heysanin wax caddaymo ah oo qeexaya in ay ku noolaayeen Mareykanka muddo dhan laba sano.
Ururka xaquuqul insaanka Mareykanka ee ACLU ayaa shaaciyay in uu qorsheynayo in maxkamadaha dalkaasi uu horgeeynayo dacwad ka dhan ah sharcigaas sida ay ku baahiyeen bartooda Twitter-ka.
Dhaqan gelinta sharcigan ayaa ku soo beegmaya xilli xaalad adag ay ka jirto xeryaha muhaajiriinta lagu hayo ee ku yaal xudduudda koonfureed ee Mareykanka la leeyahay dalka Mexico.
Madaxweyne Trump ayaa doonaya in mowqif adag uu ka qaato sidii loo xaddidi lahaa mujaahiriinta imaanaya dalkiisa, arrintaa oo uu uga golleeyahay in uu ku xoojiyo ololihiisa uu ku doonayo in mar labaad dib loo soo doorto sanadka 2020-ka.
Sharcigan cusub ayaa dhigaya in dadka muhaajiriinta ahi si degdeg ahi dalka looga dhoofin karayo iyada oo aan loo eegeyn halka ay ku nool yihiin, waxaana suurtagal ah in aysan helin qareenno u dooda.
Waaxda ammaanka gudaha ee Mareykanka ayaa sheegtay in sharcigan cusub uu iyagu u ogolaanayo in si degdeg ah ay u soo qabqabtaan muhaajiriinta uu khuseeyo sharciga.